R/Wasaaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya oo sheegay inaysan qaraxa Golaha Murtida saamayn doonin howlaha dowladda. – Radio Daljir
Mogadishu, Apr 04 -Raysal wasaaraha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxaa uu sheegay qaraxii maanta kadhacay xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee Muqdisho inaysan hakin doonin howlaha ay dowladdu xiligaan ay hayso.
“Waxaan doonayaa inaan halkaan ka cadeeyo in falkaas wuxuushnimada ahi uu naga leexinayeyn wadada aan ku raadinayno soo celinta nabadii, midnimadii iyo karaamadii Soomaaliyeed” ayuu yiri r/wasaare Cabdiweli.
R/wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay qaraxii maanta kadhacay xarunta Golaha Murtida inuu ahaa mid wuxuushnimo ah,waxaana uu tacsi uu u diray dadkii qaraxa ku dhintay.
R/wasaaraha ayaa gabagabdii sheegay dhimashada qaraxu inuu gaarayo 4-qof iyo dhaawac intaasi ka badan,iyadoona uu beeniyay inay jiraan masuuliyiin dowladeed oo qaraxa ku geeriyootay.